ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အိမ် သင်္ဘောဆေးသုတ်သင့်နေပြီ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏အိမ် သင်္ဘောဆေးသုတ်သင့်နေပြီ
Posted by phone_kyaw on Feb 15, 2012 in Critic | 24 comments
အ၀တ်အစားအသစ်တွေကို မော်ဒယ်တွေရှုံးလောက်အောင် ၀တ်ပြီး ဟိုလူနဲ့ တွေ့ ဒီလူနဲ့ တွေ့ ၊ ပြီးရင် ခရီးထွက်တာ ကောင်းပါတယ်။ တက်ကြွလှပ သစ်လွင် ဆန်းသစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကြီး (ခ) အဒေါ်က အတော်လေးကို ငယ်ရွယ် နုပျိုလှပါတယ်။
ကျနော်အကြံပေးချင်တာက ဖြစ်နိုင်ရင် အကြီး အိမ်ကိုလည်း ဆေးလေးဘာလေးသုတ်ပြီး လှပဆန်းသစ်အောင် ပြုပြင်စေချင်ပါတယ်။ မီဒီယာမှာတွေ့ တိုင်း အိမ်ကြီးက အိုဟောင်းနေပြီး စိတ်ထဲမှာ မလန်းပါဘူး။
ဒီလိုအခြေအနေကို မြန်မာလို ခေါ်ရင် မျက်နှာမှာ သနခါးနဲ့ပေါင်မှာတော့ သေးစီးကြောင်းနဲ့ ဆိုသလိုဖြစ်နေလို့ ပါ အဒေါ်။
နိုင်ငံတကာက လူတွေက ကဲ့ရဲ့ နေကြလို ပါ အန်တီရယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် ဒါလေးကိုလည်း ပြင်ပေးပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။
မှတ်ချယ်။ ။ http://www.dulux.in/index.jsp
အန်တီ့ အိမ်အတွက် ဒီဆေးကို သုံးကြည့်ပါ အန်တီ။
( မြန်မာလို ခေါ်ရင် မျက်နှာမှာ သနခါးနဲ့ပေါင်မှာတော့ သေးစီးကြောင်းနဲ့ ဆိုသလိုဖြစ်နေလို့ ပါ အဒေါ်။)တဲ့
အိမ်ကိုအလှပြင်ဖို့ အဓိကမထားပါဘူး…တိုင်းပြည်ကိုအလှပြင်ဖို့သာကြိုးစားနေတာ သိဖို့ကောင်းပါတယ်ဗျာ…
အိမ်လှလှကြီးမှာနေပြီး စိတ်ထားယုတ်ညံ့သူတွေ ဒုနဲ့ဒေးပါ..အဓိကနဲ့သာမညကို သဘောပေါက်ပါ ကိုဘုန်းကျော်…ဒီနေ့အထိတော့..အန်တီစုရဲ့အိမ်ကြီး ဆေးမသုတ်လို့ဆိုပြီးဘယ်သူမှ အန်တီစုကို ဆေးသုတ်ဖို့အကြံပေးတာ မကြားမိပါဘူး..အံ့ပါရဲ့ဗျာ!!ဘာလဲဗျ…သင်္ဘောဆေးရောင်းချင်လို့လား? စိတ်ကောင်းကောင်းထားပါကိုဘုန်းကျော်ရာ….
အရေးထဲ ဆေးသမား အဲလေ..ဆေးပွဲစားနဲ့လာတွေ့ နေတာဂျ
ဗျာ သြစတီးယားက ၀ယ်ပို့မလို့လား
မလုပ်ပါနဲ့ ကိုအုန်းကျော်ရယ် မှားလို့ ကိုဖုန်းကျော်ရယ်
သူများကိုမဝေဖန်နဲ့ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်။
အဲဒီ ဆေးသုတ်မထားတဲ့ အိမ်ကြီး ဟာ အမှုဆိုင်နေရတယ် ဆိုတာ ကိုဘုန်းကျော် သိသင့်ပါရဲ့။
အင်း… မမန့် ဘဲ နေဖို့ ဘဲ.. ဒါပေမယ့်မန့် လိုက်ပြီ..
ကိုဘုန်းကျော်ရဲ့ မိဘတွေ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘယ်လိုသွန်သင်ထားတယ်မသိဘူး
ရှေ့ ကလည်း မသွား နောက်ကလည်း ကောင်းကောင်းမလိုက် အမြဲတန်းကန့် လန့် ကန့် လန့် နဲ့ .. သူ့ မွေးတုန်းက ကန့် လန့် များမွေးခဲ့လေသလား..
ဗျို့ ကိုဘုန်းကျော်.. ဖြစ်နိုင်ရင် အကျိုးရှိမယ့်ပို့ စ်လေးတွေ တင်ပါဗျာ.. ဖတ်တဲ့ ကမ္ဘာတလွှားကမြန်မာတွေအပေါ်လည်း ငဲ့ညှာပါဦး.. အကယ်၍ ဆေးသုတ်စေချင်တဲ့ကိစ္စပြောချင်ရင်လည်း အဆင့်ရှိတဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ စကားလုံးတွေ ရွေးသုံးလို့ ရပါတယ်
ခင်ဗျား မိဘတွေ ခင်ဗျားကိုဘယ်လိုသွန်သင်ခဲ့သလဲမသိဘူး
ခင်ဗျားရဲ့ သားသမီးတွေကိုလည်း ခင်ဗျားဘယ်လိုသွန်သင်နေသလဲမသိဘူး
တိုင်းပြည်ရဲ့ အချစ်တော်အဖွားကြီးကို ပေါင်မှာသေးကြောင်းတို့ဘာတို့ကြတော့
အကောင်းဖက်ကနေမြင်ကြည့်ရင် အဲ့သည်အိမ်ကြီးကို ကလား လှလှလေး သုတ်သင့်တယ်
သူ့ဖာသာ ရှေးဟောင်းပစ္စည်းလုပ်ခြင်ရင်တော့ သိဘူးနော
နောက်တစ်ခုက အဲ့သည်အိမ်ကြီးက အမွေဆိုင် ပလာဘလမ်နေတယ်ဆိုတော့
တစ်ဦးသဘောတူ ကလား သုတ်လို့ရဘူးထင်တယ် ( အထင် )
မိဘအမွေဆိုတာက သားသမီးတိုင်းခံစားခွင့်ရှိတာကို ကျုပ်ကတော့ အဖွားကြီးဖက်ကနေ
မျိုးချစ်စိတ်ဖက်ကနေကျတော့ အဲ့သည် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သား ဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက
တိုင်းပြည်တွက် အလုပ်လုပ်သူ အဖွားကြီးကို ပေးလိုက်ပြီးရော ဒါမှမဟုတ် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပေါ့
ကျုပ်ဖြင့် ကျုပ်အဘ စပါးဂျီထဲက စပါးတွေကို နည်းနည်းပါးပါးခိုးရောင်းဘူးတာကလွဲလို့
ဒီအဖိုးကြီးပိုင်တဲ့လယ် ကျုပ်လယ်ဖြစ်ဘို့ တစ်ခါမှတောင် စိတ်မကူးဖူးဘူး
နေနှင့်ဦး ခု ကျုပ် ဓာတ်လုံးတစ်မျိုးတီထွင်နေတယ်
ခင်ဗျားတို့ ပါတဲ့ချီး ဓာတ်မြေသြဇာဖြစ်စေရမယ်မှတ်
Hello….Mg/Ko/U Phone Kyaw, I don’t know how to carry out your daily life because I’m not interesting all about you but when you post in web or somewhere, you should think about it very carefully which one is main fact & which one is ordinary, if not your thinking or your effort or your everything is useless & no meaning.
Be change to stay flexible with environment, if your original gene can’t change, you may far away from human environment in future. Very sad for u.
U /Ko /Nyi / Ba Ba Saw Pauk!
It’s sure that you never improve along the life cause of your metal status, if like that..
Actually, you should takearespect on everybody, correct. Otherwise, i think you must beaBuddhist. So please, kindly use politely in writing, speaking and dealing with anybody. if so, you will haveablessing of God on you, and then it will be ever, not often.
Anyway, just be polite for your better future and also next generation.
ိအိမ်ကိုလည်းကြည့်အုံးလေဗျာ။ အောက်ကဖြူ အပေါ်ကမဲနဲ့ ။ လှလာအောင်အကြံပေးတာပါ။ အဒေါ်ကြီးက နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုရှင်လည်းဖြစ် ကမ္ဘာကပါလေးစားရတဲ့လူဆိုတော့ ဒီလိုအိမ်အမဲတစ်ဝက်အဖြူတစ်ဝက်နဲ့ ရုပ်မဆိုးဘူးလားဟင်…။
ရုပ်ဆိုးနေတယ်ထင်လျှင် ရှင်စပွန်ဆာပေးပြီး ဆေးသုတ်ပေးမလားပြော ….
အလုပ်သမား လေဘာချာ့ခ်ျကို ကျွန်မက ရက်ရက်ရောရော လှူပေးလိုက်မယ် …. ။ အလကားနေရင်း အာသိပ်မချောင်နဲ့ …. ။ နားကြားပြင်းကပ်တယ်
မပြောတော့ဘူးလို့နေတာ။ တခုပဲပြောမယ်။ ရန်ကုန်က ဘွဲ့နှင်းသဘင်မြင်ဖူးလား။ တက္ကသိုလ်ထဲ က။ ရှေးဟောင်းကိုအဲလို ထိမ်းသိမ်းရတယ်။ အတွင်းပဲပြင်ပြီးအပြင်ကသူ့သက်တန်းကိုဖော်ပြ တာ ပေါင်သေးစီးကြောင်းလား။ မသိရင်လဲလေ့လာ။ ပြောရပြီးရောပြောနေရင်လူထဲနေလို့မရဘူး။
ကိုဘုန်းကျော် …….. ရှင်ကလေ .. ခွေးမြီးကောက် ကျည်ထောက်စွပ်တာထက်တောင် စိုးနေသေးတယ် … ။
ရှင်ပြောပုံအရဆိုလျှင် … အန်တီစုက … တစ်ပတ်မှ အကျီ င်္တစ်ထည်လဲရမလိုဖြစ်နေပြီ … ။
အန်တီစု မင်းသမီးရှုံးအောင် ဖက်ရှင်တွေ ထည်လည်းဝတ်ပြတာမဟုတ်ဘူး သိလား …. ။ သူ့ကိုချစ်တဲ့ ပြည်သူတွေ အထည်ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေက လက်ဆောင်ပေးထားလို့ဝတ်တာ … ၀ယ်ဝတ်စရာတောင်မလိုဘူး .. သဘောပေါက် .. ။
ဖြုတ်ဦးနှောက်နဲ့တွေးပြီး … အိမ်ဆေးသုတ်တဲ့ ကိစ္စက လွယ်တယ်ထင်လို့လား .. အိမ်လေးပြင်ရုံလောက်နဲ့တောင် တစ်အမေတည်းမွေးတဲ့ … မောင်နှစ်မတော်စပ်သူက … တရားစွဲသလေး ဘာလေးနဲ့ …. ။
အိမ်လှဖို့ထက် ကိုယ့်အတွင်း စိတ်ဓါတ်လှဖို့က အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ..သဘောပေါက်ထားစေချင်တယ်
ကိုဘုန်းကျော်လည်း အပေါ်ယံကိုဖယ် အနှစ်ကိုသာ ကြည့်လျှင် .. (တကယ်တော့ ဆေးက သုတ်လက်စလို့ထင်ပါတယ်၊ ခြံစည်းရိုးလည်း အသစ်ပြန်ခတ်တာ မကြာသေးပါဘူး ၊ ဖြေးဖြေးချင်းဘဲလုပ်သွားတာ သတိပြုမိပါတယ်) (ကျွန်တော့် အထင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က ဒါမျိုးတွေ အလေးမထားဘဲ သူ့နားမှ လူများက အမြင်မတော်ပါဘူးဆိုပြီး အတင်းလုပ်ပေးနေရပုံပေါ်နေပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လည်း အနှောက်အယှက်မဖြစ်အောင် ၊ တင့်တောင့်တင့်တယ်လည်းဖြစ်အောင် သူ့လူများက အတင်းလုပ်ပေးနေတယ်လို့ ခံစားမိတယ် ။ ဒါကြောင့်ကိုဘုန်းကျော်ပြောသလို အမဲတစ်ဝက် အဖြူတစ်ဝက်ဖြစ်နေတယ် ထင်ပါတယ် ။)
ကိုဘုန်းကျော် စာဖတ်ရ်ျ မန့်သူများလည်း အပေါ်ယံကိုဖယ် အနှစ်ကိုဘဲကြည့်လျှင် ……
အင်း ..အမွေဆိုင် ဆိုလား ဘာဆိုလား
အပေါ်မှာ ပြောနေကြရဲ့ …..
ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခွင့် ဘာညာ သာဒကာ တော့ သများ နားမလည်ဝူး..
အချင်းချင်း မသတ်ကြပါနဲ့ဂျာ …. မီးဒုတ်ရှို့ရမယ့်လူဒွေ သများ ဆွဲထုတ်ကြည့်ပါ့မယ်…
သများ နားလည်တာ ပြောရရင်…ဟိုတခါလေ …
ပုစဉ်းဖင်ဂျား ညှပ်ပျံရင်း ကံကောင်းလို့ မသေတဲ့ သာထိန်းဂျီး လေ…
တူမတေ တာကိုပဲ စာတတန် ပေတဖွဲ့ ရေးလိုက်သေးတယ်လေ..
မှတ်မိရဲ့မလား …ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုချိလို့တို့ ..ချော့ကပ်ကို ခြိုးခြံမျှဝေ စားသောက်ခဲ့တယ်
တို့ ဘာတို့ လုပ်တဲ့ လူဂျီးလေ …တိတယ်မလား …သများ နာမည်မေ့နေလို့ပါ…
အဲ့လူဂျီးက အဲ့ သေရွာပျံ စာတမ်းမှာ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် အသက် ကိုတောင် လိုအပ်ရင်
ပေးလှူမယ်လေး ဘာလေး ပြောနေတယ်လေ…။
သည်တော့ …. ခညားတို့ ကျုပ်တို့ ကမွဲတွေက ..သယ်လေဒီ က အနှီ ဆေးမသုတ်နိုင်တဲ့ အိမ်ဂျီးမှာ
ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်တွေ ခေါ်ဧည့်ခံရတာ ရှက်တယ်ရှိုရင်
ကမ္ဘာက တိတဲ့ သများတို့ လူမျိုး သာထိန်းဂျီး က ပိုရှက်ပေတော့မပေါ့…
သများသာဆို ပနံရသွားအောင် အင်းယားလမ်းဒေါင့်က နန်းတော် ဂျီးလှူလိုက်တယ်…
အဟုတ်… အေးလေ ..သူလည်း သည်ပိုစ့် ဖတ်မိရင် အလွန်အင်မတန် ရှက်ပီးသကာလ ..
လှူချင်လှူမှာပေါ့ နော. ……။
အသက်စွန့်မယ်ရှိုလို့ပါ …သာထိန်းဂျီးရယ် …အဟတ် အဟတ် …..အသက်မစွန့်ဘာနဲ့ ဂျာ ….။
သယ်လေဒီ့ ဖေဖေ ကျဆုံးသွားတဲ့ နေရာတွေကို ဟော်တယ် နိုက်ကလပ်တွေ ပြောင်းဖွင့်ချင်တယ် ဆိုပီး
ခလေး နို့ဆာသလို အော်အော်နေတဲ့ ဒေါက်တိုလူဝဂျီး လေ. ..အဲ့လူဂျီးအိမ်ကို သိမ်းကွာ ….ကြာဒယ်…
ဒေါ်စုသာ ဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင် ဒီထက်အဆပေါင်းများစွာ သားနားတဲ့ အိမ်မျိုး၊ နေရာမျိုး၊ နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကို ပြောဖို့တောင်လိုမယ်မထင်ပါ။ ဒီအချိန်မှာ ဒါတွေဟာ အရေးတကြီး လုပ်နေရမဲ့အရာ မဟုတ်ဖူး ဆိုတာ ဒေါ်စုသိမှာပါ။ မလိုသေးလို့ မလုပ်တာ ပဲနေမှာပါ။ အဆောင်အယောင်ကောင်းဆိုတာ အပရိက ပါ။ အရည်အချင်းသာ ဒီအချိန်မှာအဓိကပါ။ ဒေါ်စုအတွက် အလှဟာ သူ့ အရည်အချင်းပါ၊ အပေါ်ယံအလှထက် ရင်တွင်းအလှကို လူတိုင်း သိကြမှာပါ။
sorrow weiver says:
..ပါးနပ်တဲ့.. ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ… တကမ္ဘာလုံးထွက်.. ရှိတဲ့မျက်နှာအောက်ချပြီး.. အလုပ်အခွင့်အလန်းတွေ..ကုန်သွယ်ရင်ဦးစားပေးအခွန်လျှော့ဖို့တွေ.. လာရောက်ရင်းနှီမြုတ်နှံကြဖို့တွေ.. စသဖြင့်..ကိုယ့်တိုင်းပြည်အခွင့်အရေးတွေရအောင်.. နိုင်ငံတကာလှည့်တောင်းကြရတာ…။
(ပြော၇ရင်.. ဘုရှ်(အငယ်)တုံးကလည်း.. အီရတ်ကိုတိုက်တေ့ာ.. ဂျပန်လိုနိုင်ငံဆီက.. စစ်စရိပ်မျှဝေကျခံဖို့..သွားတောင်းတာပါပဲ..)
လွှတ်တော်မှာလည်း.. လွှတ်တော်အမတ်က.. သူ့နယ်သူ သူများထက်ပိုရအောင်.. ဘက်ဂျက်ပိုချပေးအောင်.. တောင်းရတာပဲ..။
တအိမ်လုံး..ရွှေတွေကွပ်ပြထားပြီး.. ပန်းစိုက်စားနေရပါတယ်ပြော.. ပြီးမှ… အခွင့်အရေးသွားတောင်းတော့.. ဟိုက.. ဘယ်ပေးချင်ပါ့မလည်း…
အကိုက ဒီလူကျပ်မပြည့်တာ ခုမှသိတာလား..ကျနော်ကသိတာကြာပြီ။
ကျပ်ကမပြည့်တဲ့အပြင် အရှက်ကလည်း မရှိဘူး၊ ပြောလို.လည်း ရှက်ရကောင်းမှန်းမသိ
၀ိုင်းဆဲလို.လည်း နာရကောင်းမှန်းမသိ။ မျက်နှာက ဘာပြောင်သလဲမမေးနဲ.။
သူ.ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအပြင်ကနေ လေကျယ်နေတာ..အပြင်မှာသာတွေ.ရင်လည်ဇလုတ်ကို ၀ရင်းတုတ်နဲ.ရိုက်သတ်ပစ်ချင်တယ်…အရှက်မရှိတဲ့လူဆိုတာ ကြံ့ဖွံပဲ
အလကားဒီလူ။ လူဆဲခံရတဲ့ပိုစ့်တွေများများရေး။ ၀ိုင်းဆဲတော့ကော်မန့်များများရပြီးပွိုင့်တိုးအောင် လုပ်ပြီးစီးပွားရှာနေတာလားမှမသိတာ။ တောထဲမှအဲလိုလုပ်နေကြလေ။ အကျင့်ပါနေပြီ။
အပြင်ပန်းလှဖို့ထက် အတွင်းစိတ်လှဖို့က အဓိကဆိုသလိုမျိုးပေါ့……..
အိမ်ကြီးလှနေပြီး အထဲမှာက ပုတ်သိုးနေတာတွေဘဲရှိရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ………
တိုင်းပြည်ကောင်းစားဖို့ကြိုးပန်းနေသူက ပကာသနတွေအတွက် တွေးနေဖို့ အချိန်မပိုနိုင်ဘူး ……..